एभिन्युज टेलिभिजनराष्ट्र बैंकले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने गरी मौद्रिक नीति बनाउने - एभिन्युज टेलिभिजन
27 Jestha 2075 Sunday 8:56 pm प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर मौद्रिक नीति बनाउने जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने गरी मौद्रिक नीति बनाउने बताउनु भएको हो । आईतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुद्रा स्फितिलाई नियन्त्रण गर्न पनि मौद्रिक नीति आउने स्पष्ट पार्नु भयो ।
उहाँले विगत २ वर्षयता मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष भित्र ८ प्रतिशत पु¥याउन सकिने सम्भावना रहेको पनि बताउनु भयो ।
गभर्नर नेपालले सरकारमा स्थायित्व आएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न कठिनाई नहुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नु भयो ।
यसैबीच जेष्ठ २७, २०७५ चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मुलुकको शोधानान्तर घाटा १८ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ ।
मुलुकमा भित्रने रकमको तुलनामा बाहिरीने रकम अघिल्लो वर्ष ५३ करोड रुपैयाँले बचत रहेकोमा यो वर्ष करीब १९ अर्ब घाटामा पुगेको हो । राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको १० महिने समीक्षामा चालु खाता १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको उल्लेख छ ।
यो अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह अघिल्लो वर्षभन्दा करीब ४ अर्बले बढेर १५ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति बैशाख मसान्तसम्म १० खर्ब ७२ अर्ब ८५ करोड कायम भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
रेमिटेन्स बैशाखसम्म ७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ६ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ३ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको थियो । सरकारको बजेट घाटा १ खर्ब ३८ अर्ब २३ करोड पुगेको छ । मुद्राप्रदाय ११ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ ।
कुल आन्तरिक कर्जा १५ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल व्यापार घाटा २२ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब १९ अर्ब १८ करोड पुगेको छ ।
जसमा वस्तु निर्यात ९ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ भने आयात २१ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ८५ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । बैशाखमा मुद्रास्फीति ४ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ ।
कुल वर्षमा औसत मुद्रास्फीति प्रक्षेपित सीमाभ न्दा न्यून रहने अनुमान केन्द्रीय बैंकको छ ।
तथ्याङ्क विभागको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुमानका आधारमा मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधि सही दिशामा रहेको केन्द्रीय बैंकको निष्कर्ष छ ।
आर्थिक वर्षको शुरुमै आएको अविरल वर्षा तथा डुबानले कृषि क्षेत्रको बृद्धिदरमा केही संकुचन आएपनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ६ प्रतिशतको बृद्धि रहने अनुमान बैंकले गरेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता उपयोग बढ्नु तथा निर्माण, खानी तथा उत्खनन्का साथै पर्यटन क्षेत्रमा भएको बृद्धिले अर्थतन्त्रमा योगदान र्पुयाइरहेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत आर्थिक बृद्धिदर ८ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिनुले मुलुकले उच्च आर्थिक बृद्धिको बाटो समातेको संकेत मिलेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
काठमान्डौँ उपत्यकाका अधिकांश पेट्रोलपम्पले उपभोक्तालाई ठगी गरेको तथ्य खुलासा !(भिडियो रिर्पोट)
काठमान्डौँ : काठमान्डौँ उपत्यकाका अधिकांश पेट्रोलपम्पले उपभोक्तालाई ठगी गरेको तथ्य खुलासा भएको छ ।अनुगमनको क्रममा अधिकांश पेट्रोल पम्पले सफ्टवयर नै ...
ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही : कोटेश्वर–कलङ्की सडक खण्डमा आकाशे पुल निर्माणमा ढिलाइ
गोलभेडाको भाउ ५ वर्ष यताकै सबैभन्दा उच्च